Nhau - Masiki, zvinzwisise kuburikidza nematanho
Kumbomira TYPE MASK
KAPU TYPE MASK
PLANAR RINOGONESESWA RESPIRATOR
CM Mask Nhoroondo
Masiki, zvinzwisise kuburikidza nematanho
Parizvino, kurwira kwenyika kurwisa mabayo kwakakonzerwa neruzivo coronavirus kwatanga. Se "mutsetse wekutanga" wekuchengetedza hutsanana, zvakakosha kupfeka mamask anosangana nedenda rekudzivirira. Kubva kuN95, KN95 kusvika kumasikisi ekurapa ekurapa, vanhuwo zvavo vanogona kunge vaine mamwe mavara asingaone musarudzo yemask. Pano isu tinopfupikisa iwo ruzivo rwepfungwa mundima yakajairwa kuti ikubatsire iwe kunzwisisa iyo yakajairika pfungwa yemasikisi.
Ndeapi matanho etsika?
Parizvino, zviyero zveChina zvemasikisi zvinosanganisira GB 2626-2006 "Zvekufema zvekudzivirira zvekuzvidzivirira -mhando yepamberi firita inopesana necheturu yekufema", GB 19083-2010 "Unyanzvi hunodiwa kumasikisi ekudzivirira ekurapa", YY 0469-2004 "Unyanzvi zvinodiwa pakurapa masiki ekuvhiya ”, GB / T 32610-2016" Unyanzvi Magadzirirwo eDhivhosi Masiki Anodzivirira ", nezvimwewo, inovhara kuchengetedzwa kwevashandi, kuchengetedzwa kwekurapa, kuchengetedzwa kwevanhu uye mimwe minda.
GB 2626-2006 "Kufuridzira Yekudzivirira Yekushandisa Yekuzvidzora-Yega Kuchenesa Anti-Chikamu Chikamu Chekufema" yakasimudzwa neyaimbova General Administration yeUhu hwakanaka hweKutarisa, Kuongorora uye Kuzviparadzanisa neNational Standardization Management Committee. Icho chinosungirwa chiyero chechinyorwa chakazara uye chakashandiswa musi waZvita 1, 2006. Zvinhu zvekudzivirira zvakatemwa mumiyero zvinosanganisira marudzi ese ezve chinhu, kusanganisira guruva, utsi, mhute uye tusingaoneki. Inotaridzirawo kugadzirwa uye hunyanzvi marongero emidziyo yekufema yekudzivirira, uye iwo maratidziro, chimiro, chimiro, mashandiro, uye kusefa kwekutsetseka kwemasikisi eguruva (Guruva rekudzivirira mwero), kufema kufema, nzira dzekuyedza, chiratidzo chechigadzirwa, kurongedza, nezvimwe zvine yakasimba zvinodiwa.
GB 19083-2010 "Zvinodikanwa zvehunyanzvi zveMishonga Inodzivirira Masiki" yakasimudzwa neyaimbova General Administration yeHurumende Supervision, Inspection uye Quarantine neNational Standardization Management Committee, uye yakaitwa muna Nyamavhuvhu 1, 2011. Iyi standard inotsanangura hunyanzvi zvinodiwa, bvunzo. nzira, zviratidzo uye mirairo yekushandiswa kwemasikisi ekudzivirira ekurapa, pamwe nekurongedza, kutakura uye kuchengetedza. Iyo yakakodzera kushandiswa munzvimbo dzekurapa dzinoshanda kusefa mweya unofefetera uye unodzivirira madonhwe, ropa, mvura yemumuviri, masevhisi, nezvimwewo. 4.10 yemiyero inokurudzirwa, uye zvimwe zvese zvinosungirwa.
YY 0469-2004 "Zvinodikanwa zvehunyanzvi zveMasiki ekuvhiya Masiki" yakasimudzwa neHurumende Chikafu neDrug Administration senge muyero weindasitiri yemishonga uye yakaitwa musi waNdira 1, 2005. Uyu muyero unodoma hunyanzvi zvinodiwa, bvunzo nzira, zviratidzo uye mirairo yekushandisa, kurongedza, kutakura uye kuchengetedza masiki ekuvhiya ekurapa. Iwo muyero unotaura kuti hutachiona hwekunatsa kusefa kwemasikisi haufanire kunge uri pasi pe 95%.
GB / T 32610-2016 "Tsananguro dzehunyanzvi dzeMasikati Ekudzivirira Masiki" yakapihwa neyaimbova General Administration yeHurumende Kutarisirwa, Kuongorora uye Kuzviparadzanisa neNational Standardization Management Committee. Ndiyo nyika yangu yekutanga yenyika yekuchengetedza masiki uye yakaitwa munaNovember 1, 2016. Iyo mwero inosanganisira masiki zvinhu zvinodiwa, zvimiro zvedanho, chitupa chiziviso chinodiwa, kutaridzika zvinodiwa, nezvimwe. Zviratidzo zvikuru zvinosanganisira zvinoshanda zviratidzo, zvine mutsindo nyaya yekusefa , kufema uye kukurudzira kurwisa zviratidzo, uye adhesion zviratidzi. Chiyero chinoda kuti masks anokwanisa kugona zvakachengeteka uye akasimba kuchengetedza muromo nemhino, uye hapafanire kuve nemakona akapinza nemakona anogona kubatika. Iyo ine yakadzama mirau pazvinhu zvinogona kukonzera kukuvadza kumitumbi yevanhu senge formaldehyde, dhayi, uye microorganisms kuona kuti veruzhinji vanogona kuzvipfeka. Kudzivirirwa kana wakapfeka masiki ekudzivirira.
Ndeapi masks akajairika?
Ikozvino masks anonyanya kutaurwa anosanganisira KN95, N95, masiki ekuvhiya ekurapa zvichingodaro.
Yekutanga masks eK95. Zvinoenderana nekupatsanurwa kweiyo standard standard yeGG2626-2006 "Yekufema yekudzivirira michina yekuzvidzora yega-mhando inorwisa-inofema mweya", masiki akapatsanurwa kuita KN neKP zvinoenderana nehunyanzvi danho reiyo firita chinhu. KP mhando inokodzera kusefa oily particles, uye KN mhando inokodzera kusefa isina-oiri zvikamu. Pakati pavo, iyo KN95 maski painowanikwa ine sodium chloride particles, kugona kwayo kusefa kunofanirwa kuve kwakakura kupfuura kana kuenzana ne95%, ndiko kuti, kugona kwekusefa kweasina mafuta oiri pamusoro pe0.075 microns yakakura kudarika kana yakaenzana ne95%.
Iyo N95 maski ndeimwe yeanopfumbamwe masisitimu ekudzivirira masiki anozivikanwa neNIOSH (National Institute of Occupational Safety uye Hutano). "N" zvinoreva kusapikisa mafuta. "95 ″ zvinoreva kuti kana ikaburitswa kune yakatarwa nhamba yezvakakosha bvunzo, iko kusungwa kwemukati mukati memasikisi kunodarika 95% kuderera pane iyo yakasungwa kunze kwemask.
Iko kune mask mu "Pin Shoko Maka"?
Musi waNovember 9, 2018, iyo T / ZZB 0739-2018 "Civilian Oiri Fume Mhepo Inofema" yakagadzirwa naJiande Chaomei Mazuva ese Chemical Co, Ltd. yakaburitswa neZhejiang Brand Construction Association.
Huru hunyanzvi hwehunyanzvi hweichi chiyero hwakagadzwa zvinoenderana neyakagadzirwa maitiro maitiro, tarisa kuna GB / T 32610-2016 "Unyanzvi Magadzirirwo eDhivhosi Masiki Anodzivirira", inosanganiswa ne GB2626-2006 "Kuzvidzora-yega Filtered Particle Respirators", GB19083-2010 " Maitiro Ekurapa Ekurapa akadai seMasikisi, US NIOSH "Masiki Anodzivirira" uye European Union EN149 "Masiki Anodzivirira" anonyanya kushandiswa munzvimbo dzekudzivirira kwekufema mukubatana neakanyanya oiri particulates kuwanda (senge makicheni nenzvimbo dzebhariki). Izvo zvirevo zvinoratidza kuti kusefa kwekuchenesa kwemafuta ane zvikamu zvinodarika makumi mapfumbamwe kubva muzana, uye zviratidziro zvakasara zvinoenderana nekusangana neA-nhanho yemasikisi evagari uye zviyero zvemafuta-anoratidza ekuchengetedza masiki muEurope neUnited States, uye isa mberi zvakakwirira zvinodiwa pakubuda, kufema mweya, zviratidzo zvehutachiona, uye pH. Yakawedzera izvo zvinodikanwa zvekunonoka hypersensitivity index.
Kune akawanda masiki ekudzivirira ane KN90 \_ KN95 giredhi isiri-oiri zvikamu mumusika. KP-mhando masiki ekudzivirira anowanzo kuve nemishonga yakanyanya, uye yavo aesthetics uye nyaradzo ese ari maviri maindasitiri ekudzivirira masiki zviyero, izvo zvakaoma kusangana nezvinodiwa zvezuva nezuva zvevanhu.
Iko kuumbwa kwematanho ehurumende mafuta fume masiki yakaita basa rakanaka muhutano hwevanhu. Kune vazhinji vevashandi vekicheni, kuumbwa kweiyi muyero kunobatsira kusarudza yakakodzera michina yekudzivirira kune yavo yekushandira nharaunda.
Uyezve kune masiki ekuvhiya ekurapa. Zvinoenderana nedudziro yeYY 0469-2004 "Zvinodikanwa zvehunyanzvi zveMasiki ekuvhiya Masiki", masiki ekuvhiya ekurapa "akapfekedzwa nevashandi vezvekurapa munzvimbo isina basa yekuvhiya, kuchengetedza varwere vanorapwa uye vashandi vezvekurapa vanoita mabasa asina kunaka, uye kudzivirira Masiki ekuvhiya ekurapa anoparadzirwa neropa, mvura yemumuviri uye kuputika masiki anopfekwa nevashandi vekubasa. ” Rudzi urwu rwemaski runoshandiswa munzvimbo dzekurapa dzakadai semakiriniki ekurapa varwere, marabhoritari, nemakamuri ekuvhiya, uye rakakamurwa kuita dura risingapinde mvura, firita rukoko, uye nhurikidzwa yekunyaradza kubva kunze kusvika mukati.
Sainzi sarudzo yemasikisi
Nyanzvi dzakataura kuti pamusoro pekupa dziviriro inoshanda, kupfeka mamask kunofanirwa zvakare kufunga nezve kugadzikana kweanopfeka uye kwete kuunza zvakashata senge njodzi dzehupenyu. Kazhinji kutaura, iko kumusoro iko kwekudzivirira kwekuita kwemask, kwakanyanya kukanganisa mukuita kwekunyaradza. Kana vanhu vakapfeka chifukidzo uye vachifemesa, iyo masiki ine kumwe kumisidzana nemhepo kuyerera. Kana iyo inhalation kuramba yakanyanya kukura, vamwe vanhu vanonzwa dzungu, chipfuva kuomarara uye kumwe kusagadzikana.
Vanhu vakasiyana vane maindasitiri akasiyana siyana uye mapiritsi, saka vane zvakasiyana zvinodiwa pakuiswa chisimbiso, kuchengetedzwa, kunyaradzwa, uye kuchinjika kwemask. Vamwe vakasarudzika vanhu, vakadai sevana, vakwegura, uye vanhu vane zvirwere zvekufema uye zvemwoyo zvirwere, vanofanirwa kusarudza nemhando mhando mamask. Pafungidziro yekuona chengetedzo, dzivisa tsaona dzakadai sehypoxia uye dzungu kana uchidzipfeka kwenguva refu.
Chekupedzisira, yeuchidza munhu wese kuti zvisinei nemhando ipi yemasikisi, anofanirwa kubatwa nemazvo mushure mekushandisa kuti arege kuva manyuko matsva ehutachiona. Kazhinji gadzirira mamwe masiki mashoma uye oatsiva iwo nenguva yekuvaka yekutanga tambo yekudzivirira kuchengetedza hutano. Ndinoshuva imi mose utano hwakanaka!
Jiande Chaomei Mazuva ese Chemical Co, Ltd. yakavambwa muna 1996. Iyo kambani ibhizimusi repamusoro-soro iro rinoshanda mukutsvagisa nekusimudzira nekugadzira zvigadzirwa zvekudzivirira mweya. Iyo zvakare yepamba yekutanga-kirasi yepamusoro nyanzvi guruva-chiratidzo Chinese PPE nyanzvi inogadzira mamask. , Ndiyo imwe yemakambani epamba epamba anoita mundima iyi. Iyo kambani ine nzvimbo yekuvakira ye42,000 mativi emamita. Parizvino, kambani iyi ine yepamhepo yekugadzira inokwana anopfuura mamirioni mazana mana emasikisi ehunyanzvi. Muna 2003, zvinoenderana nemirairidzo yeNational Development and Reform Commission, North Korea yakangopa dziviriro yeBeijing Xiaotangshan Hospital, Ditan Hospital, Beijing Infectious Disease Hospital, PLA General Logistics department, 302 uye 309 China-Japan Hushamwari Zvipatara uye neNational. Emergency Material Reserve Center "SARS" masiki.
Kuti urwe nemhando iyi nyowani yechirwere checoronavirus pneumonia, North Korea neUnited States vakayeuka nekukurumidza vashandi vakapoterera nemitero yavo katatu kuti vape vimbiso yakasimba kwazvo kune varwi vari kurwa kumberi. Yakarumbidzwa nemisoro yeCCTV News Network!
Rumbidzai nehana yakadaro "brand brand mark" bhizinesi, uye farai kune varwi vari kutambura kumberi. Vanhu venyika vanosimbisa kuvimba kwavo, vanobatsirana, vanounganidza vanhu vese, uye vanodzivirira uye kudzora denda iri. Tichakunda zvirokwazvo iyi hondo yekurwisa denda iri.
Munguva pfupi yapfuura, Zhejiang Provincial Institute of Standardization yakakurumidza kuongorora anopfuura makumi maviri epasirese, ekune dzimwe nyika, emunyika, maindasitiri uye emunharaunda zviyero zvezvinodiwa zvehosha yekudzivirira uye kudzora zviyero zvakatenderedza masiki ekudzivirira ekurapa, zvipfeko zvekudzivirira zvekurapa, zvekudzivirira zvekurapa, nezvimwe. kutenga uye kupinza Iyo yakatotungamira makambani kugadzira masiki uye zvimwe zvinoenderana zvekuchengetedza zvigadzirwa kuti zvipe yakaenzana nyanzvi yehunyanzvi rutsigiro, inoshingairira kubatsira kuvandudza mhando yechirwere chekudzivirira uye kudzora zvigadzirwa, uye kugadzirisa dambudziko rekushomeka kwemishonga yekurapa.
Shangshan Village, Yangcunqiao Town, Jiande Guta, Hangzhou, Zhejiang Province, China
Iyo CM Mask Kambani Nhoroondo